Refrigerant liquid, fluorocarbon fluid de cassette, faire liquidateur pour chairletter fabricant à China
Description:Rano mangatsiaka,Fiarovana amin'ny fluoro-karbônika,Fiarovan-drano madinidinika,Kofehy ho an'ny kodiarana,,
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kofehy ho an&#39;ny kodiarana
Ny vokatra avy amin'ny Kofehy ho an'ny kodiarana , mpanofana manokana avy any Shina, Rano mangatsiaka , Fiarovana amin'ny fluoro-karbônika mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fiarovan-drano madinidinika R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Tsy misy solontenan'ny dielectric ho an'ny fiompiana fako  Contact Now
Tsy misy solon-drivotra solon'ny fluoridin'ny solosaina  Contact Now
7 PH Dielectric Coating for Gearbox  Contact Now
Mampidi-doza ny ranon-tsavoka amin'ny rivotra  Contact Now
Fitaovam-pitaterana am-paty matevina amin'ny fiara  Contact Now
Fiarovana avo lenta amin'ny ranomandry  Contact Now
Fiarandalamby fandroana fluorocarbon ho an'ny gearbox  Contact Now
Fiarovan'ny fluorocarbon an'ny gilasy  Contact Now
Fitaovana Cooling Medium ho an'ny kodiarana  Contact Now
Toeram-piofanana goavam-be amin'ny rano fisotro madio  Contact Now
TUWF-47 tsy misy solon-drivotra matevina ho an'ny fiara mifono vy Anarana simika: Perfluorohexene Amin'ny ankapobeny, ny faritra manodidina ny boaty misy amboradara ho an'ny vatan-tsoroka sy helikoptera dia mihoatra noho ny ampy...
TUWF-47 Fanondrahana solon'ny fluoride tsy misy loza Anarana simika: Perfluorohexene Fluorocarbon hihena antonony andian-dahatsoratra dia Perfluorinated rano akora, izay manana dielectric avo. Fanamafisana ny famokarana hafanana amin'ny...
7 PH Dielectric Coating for Gearbox Anarana simika: Perfluorohexene Mila angom-bary fanampiny ny fitaovana fiasana. Ny fampiasana mpankafy izay napetraka = ho an'ny fihodinana haingam-pandeha dia vahaolana iombonana. Ho an'ity vahaolana ity...
Mampidi-doza ny ranon-tsavoka amin'ny rivotra Fampiasana entona: Ity vokatra maromaro ity dia tsy ampiasaina betsaka amin'ny hafanana mifehy ny hafanana ny rafitra fanodikodinana, indrindra ho an'ny rohy rehetra amin'ny famokarana...
Fitaovam-pitaterana am-paty matevina amin'ny fiara TUWF-47 dia singa HFC tsy manam-paharoa manana lanjany ODP zero ary ambany ny vidin'ny GWP. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny fanadiovana, fanosotra sy ny fanamainana amin'ny...
Fiarovana avo lenta amin'ny ranomandry Amin'ny fampivoarana haingana ny teknôlôjian'ny fiara sy ny fitsipika mifehy ny tontolo iainana, indrindra ny fampivoarana ny orinasa hybrid sy elektrika, Ny fepetra ambony kokoa napetraka...
Fiarandalamby fandroana fluorocarbon ho an'ny gearbox Maro ny antony mahavariana sy ara-toekarena no miova amin'ny vidin'ny lantom-barotra avo lenta kokoa. Ny hafanana dia singa manan-danja amin'ny fomba fijery mekanika. Raha...
Fiarovan'ny fluorocarbon an'ny gilasy Ny toetra mampiavaka ny dielectric : Ny fluorocarbon dia misy tsiranoka mahomby ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoam-pandehan'ny hafanana hafanana hafanana; * Ny tebitin- tsiran-tsiran-...
Fitaovana Cooling Medium ho an'ny kodiarana Anarana simika: Perfluorohexene Rehefa mihazakazaka haingana kokoa ny milina dia mihamafana ny famenoana haingana ary mihamitombo ny mari-piterany Mihamatahotra kokoa amin'ny famolavolana fiara....
Toeram-piofanana goavam-be amin'ny rano fisotro madio Ny vahaolana fluoride dia nampiharina tamin'ny fanamainana lalina ho an'ny rafi-panadinana solosaina sy ny fanamafisana hafa ary ny famongorana ny hafanana, toy ny rivotra miteraka...
Shina Kofehy ho an'ny kodiarana mpamatsy
Ahoana ny famenoana ny valizy na fitaovam-pitatitra ao amin'ny rivotra? Araka ny fomba fanao tany am-piandohana, mety hanamboatra fitaovana fanamafisam-peo mba hahazoana antoka fa azo ampiasaina araka ny tokony ho izy ilay fitaovana fanodinana motera. Ao anaty tavoahangy mahamay, mifandray amin'ny rano mangatsiatsiaka. Rehefa mandalo ny fantson-tsambo ny rano mafana, dia hafindra any amin'ny rano mafana ny hafanana, ary hafindra ny hafanana, mba hahatratrarana ny voka-dratsiny. Ny tsy fahampian'ny fampiasana rano mahamay dia tsy tokony ho lehibe loatra ny tahan'ny rano mangatsiaka, ary tsy maintsy mandalo amin'ny fitaovam-piadiana ny milina mpamadika haingana. Raha tsy miasa mandritra ny fotoana maharitra ianao dia ho tandindomin-doza amin'ny andro mangatsiaka. Tsy maintsy madio tanteraka ny rano mafana.
Ny vata fampangatsiahana amin'ny rivotra dia afaka mamaha tanteraka ireo hadisoana ireo. Ny fanamafisana ny fitaovana ampiasaina dia ahafahana manatsara ny fahaiza-manao, ary hivoahana ny fiainana mifanaraka amin'izany. Raha toa ka mila vahaolana amin'ity faritra ity ianao, dia miangavy anao amin'ny alàlan'ny mailaka.
Rano mangatsiaka Fiarovana amin'ny fluoro-karbônika Fiarovan-drano madinidinika Kofehy ho an'ny kodiarana Rano mangatsiaka Vs